Famaliana ny antso amin’ny 910 Mpitsabo 38 nomena fiofanana manokana
Mandeha hatrany ny laharana 910 izay antsoina raha misy olana mampiahiahy momba ny coronavirus eny amin’ny fokontany sy ny secteur. Mbola azo iantsoana ihany koa ny resaka pesta, aretim-pivalanana,
fa ny tena be mpiantso efa an’arivony dia ny covid-19. Misy ny antso very noho ireo mpananihany, izay nanaovan’ny Dr Manitra Rakotoarivony fanentanana hoe: mba avelao io hiasana satria misy mila an’io maika amin’izao hamehana izao. Mitohy hatrany kosa ny fanatsarana, ka nisy omaly maraina ny fampiofanana vaovao ho an’ireo mpitsabo, mpitsabo mpanampy, mpampivelona miisa 38 handrindra. Ilaina ireo satria raha misy fanontaniana ara-pahasalamana dia mety hisy valin-teny ara-teknika ilaina satria ireo tao dia mpilatsaka an-tsitrapo. Vita ny fiofanana an-tsoratra ary narahina fampiharana ny hariva. Manomboka anio, dia hiparitaka amina ivon-toerana telo eto Antananarivo izy ireo. Ireto ekipa ireto no hifandray ihany koa amin’ny CCO covid-19.